Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: 22 taona lasa izay !
Inty sy nday: 22 taona lasa izay !
06 Novambra 1995 – 06 Novambra 2017. Feno 22 taona katroka androany, andro alatsinainy toa izao koa tamin’izay, ny nahamay an’Anatirova. Tranga iray isan’ny navesatra teo amin’ny malagasy iny satria ny hasim-pirenena mihitsy no kila hotohoton’ny afo noho ny haratsian-toetran’ireo saribakolin’ny mpanani-bohitra vahiny.
Maro ny hetsika nitranga nanomboka ny alin’iny faha-6 novambra 1995 iny. Asa koa na izany no hoe « nentanin-kafanam-po » na ahoana fa tena nipololotra ny fitiavan-tanindrazana teo amin’ny malagasy maro, ary nanana fahavitrihana hamerina hanarina sy hanangana indray an’Anatirova ny maro.
Dia io iarahantsika mahita io aloha izy ankehitriny. Nisy ny mpitondra fanjakana nifandimby nitantanana teto, izay samy niezaka ny nanao fitaovana maloto hikatsahan’izy ireny laza amam-boninahitra sy tombontsoa manokana amin’ny hoe « fananganana indray an’Anatirova ». Ny sasany aza moa nikasa hanorim-ponenana teny mihitsy, ary saika hisavi-tsaranga ka hisora-tena ho « mpanjaka » mitantana ny Repoblikan’i Madagasikara.
Fa ny tranga iray mampalahelo koa, eo anilan’izany, dia ny fisian’ny sokajin’olona sasany manararaotra ny « rano mikobana » hikatsahana tombontsoa sy voninahitra manokana koa, ary mampiasa ho amin’izany ny anarana maha-« Andrianan’Imerina » azy ireny. Zary mampiseho fifandroritan-kevitra eo amin’ny samy Andriana, izay tokony ho fanoitran’ny fampiombonan-kery sy fampitoviam-pijery hoenti-miatrika ny tena fanarenana an’Anatirova.
Ankoatra izany rehetra izany, samy nilokaloka ny mpisehatra politika nifaninana tamin’ny fifidianana isan-tokony teto amin’ny tany sy ny fanjakana fa « hikatsaka izay hivoahan’ny marina momba ny nahamay an’Anatirova, ary hanao izay hahalalana ny tompon’antoka sy ny mpitsikombakomba isany tamin’iny heloka bevava iray iny ka nahavita nandoro an’Anatirova ». 22 taona aty aoriana, tsy mbola hita mangirana ny momba izany, ary vao mainka aza toa miha-mikitrotra, miha-tsy ananana fanantenana intsony.
Efa maro rahateo ny olona no tsy mihevitra intsony ny hahafantarana ny marina sy ny meloka tamin’iny raharaha iny.
Dia ahoana izany ny ho avy ? Mbola hitohy ve izany ny maha-« mistery » ny nahamay an’Anatirova ?
Dia hanara-dia an’ireo raharaha nosokajoiana ho goavana (grands dossiers) toa ny raharaha Ratsimandrava, Raharaha Joel Rakotomalala, Raharaha Sibon Guy, raharaha Jeneraly Lucien Rakotoniriany, raharaha « Iveco », Raharaha « Calumet », sy ny maro tsy ho voatanisa koa ange izany ity Raharaha Anatirova ity e !
Tamin’ny fotoanandro, tsaroana fa efa nisy ny voasambotra fa tsy fantatra ny nihafarany. Tamin’ireo voasambotra aza, nisy ny namono tena tamin’ny alalan’ny fanapahany ny filahiany, saingy tsy maty. Dia ahoana koa ny tohiny satria matoa nikasa hamono tena, nahafanta-javatra ve ?
Raha tohizana dia mbola manitikitika ny saina koa ny hoe « ary nankaiza avy moa ny vola voahangona tamin’ny hoe hanarenana ny Rova ? » Ny Fikambanana niarahan-dRazanatseheno Henry sy Ralaiarijaona tamin’izany fotoana ihany no fantatra fa noravaina satria nisy resaka tsikaritr’izy ireo fa tsy nazava, ka naverina tamin’ireo rehetra nandrotsa-bola ny vola voaangona, fa ny ankoatra izay, ahoana ? Ny vola avy any ivelany azo tamin’ny fitondrana Ravalomanana, nanakory ny fitantanana azy, sy ny maro e ! Samy tsy misy fantatra fa tompon-trano mihono avokoa ny rehetra e !